သင်မသိသေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဆက်စပ်မှု
တချို့သော အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတချို့က လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်များစွာနဲ့ ဖန်တီးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဝေါဟာရအကြောင်းကို အဘိဓာန်မှာ ရှာရင်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သိုပေမဲ့ ဘယ်လိုဖွဲစည်းခဲ့သလဲဆိုတာတော့ သင်ရှာကြည့်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေက ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲဆိုတာ sayar.com ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင် ၂၆ လုံး ရှိပါတယ်။
အဲဒီ အက္ခရာတွေကို ဒီလိုနံပါတ်စဉ်တွေ ထိုးပြီး စီကြည့်ရအောင် . . .
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5,F=6, G=7, H=8, I=9, J=10,K=11, L=12, M=13, N=14, O=15,P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20,U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26
အဲဒီလို စီပြီးသွားရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ အက္ခရာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့နံပါတ်တစ်ခုစီ ရှိသွားပါပြီ။
ကဲ ဘ၀မှာ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ဖို့ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ တွက်ကြည့်ကြစို့။
၁။ အလုပ်ကြိုးစားခြင်း (Hard Work)
အဲဒါကြောင့် အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ဗဟုသုတ (Knowledge)
ဗဟုသုတပြည့်စုံခြင်းကတော့ ၉၆ % အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ချစ်ခြင်းတရား (Love)
12+15+22+5 = 54 %
ချစ်ခြင်းတရားဟာ အောင်မြင်ဖို့ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။
၄။ ကံတရား (Luck)
12+21+3+11 = 47 %
ကံတရားကတော့ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပတ်သက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်ရနိုင်မယ့်အကြောင်းတရား တခုခုတော့ ရှိရမယ်။
သိပြီ ပိုက်ဆံ . . . ။
၅။ ပိုက်ဆံ (Money)
13+15+14+5+25 = 72 %
မဟုတ်ပြန်ဘူး . . . ပိုက်ဆံကလည်း
၇၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းရင်တော့ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ အဲဒီတော့ ပြဿနာရဲ့ အဖြေကို စိတ်နေစိတ်ထားလေး ပြောင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
ဟုတ်ပြီ . . .စိတ်နေစိတ်ထား။
၇။ စိတ်နေစိတ်ထား (Attitude)
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100 % ရပါပြီ . . . ။
ဘ၀ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာကတော့ စိတ်နေစိတ်ထားပါပဲ။
“Attitude is everything ” လို့ ဆိုပါတယ်။
source - Boltnutshopinmyanmar
mean of english vocabulary
ထူးချွန်အောင်မြင်သူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း (၄) မျိုး
ဂျပန်ဘာသာသင်ယူနေသူများအတွက် လေ့လာနိုင်မည့် free website လေးတွေပါ~~~~
PROFIT COMPUTER & MOBILE TRAINING CENTER
UAT Maths Enrichment Classes